Ermine Qaboojinta (Frosting Frosting or Cold Milk Frosting) - Dhaxan-Qaboojin Iyo Iicil
Qaboojinta Ermine waa mid fudud, qalafsan oo aan macaan badanayn
Qaboojiyaha 'Ermine' (oo sidoo kale loo yaqaan 'roux frosting' ama qaboojinta caanaha la kariyey) waxaa lagu sameeyaa bur iyo sonkor caano lagu karsadaa si loogu sameeyo cajiin macaan. Jinkaan ka dib waxaa lagu karbaashaa subagga la jilciyey illaa uu ka ifo oo qalafsanaado. Vaniliga iyo milixda ayaa lagu daro dhadhan ahaan.
Tani waxay u ekaan kartaa geedi socod yaab leh (markii hore ayay igu sameysay) laakiin dhab ahaantii waa dhaxan dhadhan fiican leh! Qaboojiyaha Ermine wuxuu i xasuusiyaa waxyaabo badan oo dhaxantaas ah oo aad ka heli karto dong dong ama twinkie. Aad u fudud oo ku dhowaad la mid ah kareem la karbaashay .
Qabowgan ayaan ukumo ku dhex jirin markaa waa beddelaad aad u wanaagsan Swiss Meringue Buttercream haddii aad rabto baraf fudud laakiin aadan yeelan karin ukumo.
Muxuu dhadhamiyaa dhadhanka dhaxan?
Qaboojiyaha Ermine runti wuu dhadhamiyaa! Waxaan qirayaa sameynta roux uma muuqan mid aad u xiiso badan laakiin ka dib markaan dhadhansiiyay, waan arki karay sababta ermine qabowga u tahay dhaxan dhaqameedka loo isticmaalo keega jilicsan ee casaanka ah . Waa wax aad u fiican!
Qabowgu waa mid aad u jilicsan oo kareem leh. Dhadhan faniin fudud oo fudud oo aan tilmaamayn dhadhan daqiiq. Waan ballan qaaday.
Sideed u sameysaa dhaxan ermine ah?
Samaynta barafowga ermine runti waa wax fudud.
Isku dar bur iyo sonkor ku jira weel dhex dhexaad ah iyo rootiga kuleylka kuleylka dhexdhexaadka ah dhowr daqiiqo si aad daqiiqda u kariso.
Ku dar caanahaaga kuna walaaq isku dar. Karkari kuleyl oo yaree kuleylka dhexdhexaadka ah. Kari ilaa inta ay isku dherer tahay. Hubso inaad si joogto ah u walaaqdo si aad uga hortagto caanaha inay gubtaan.
Ku darso isku dar ah baaquli aan kululeyn oo ku dabool duub caag ah (hubi in caagku taabto dusha sare ee isku darka) oo ha qaboobo. Tayda ayaan dhigay qaboojiyaha.
Dhig subaggaaga baaquli isku-darka miiskaaga oo leh foornada ku lifaaqan. Hoos u bax ilaa iftiin iyo qalafnaan badan.
Isku dar burkaaga subaggaaga waxoogaa yar. Waxaan isticmaali jiray qaaddo laakiin waxaad sidoo kale isticmaali kartaa bacda dhuumaha ama koobka wax lagu cabiro.
Ku dar faniinkaaga iyo milixda oo waad dhamaysay!
Miyay qalafsanaanta qabowgu u baahan yahay in la qaboojiyo?
Qabowgan ayaa looga tagi karaa heerkulka qolka illaa 6 saacadood illaa iyo inta uusan aad u kululayn. Waa inaadan haysan wax subag ah oo subag kuleyl badan haba ahaadee. Sababtoo ah waxay kujirtaa caano markaa haraaga waa in la qaboojiyaa ilaa usbuuc ama la qaboojiyaa ilaa 6 bilood. La mid ah qaboojiyaha farmaajada.
Qaboojinta Ermine waa in lagu cunaa heerkulka qolka. Keegaaga kala soo bax qaboojiyaha saacad ama laba kahor intaadan cunin.
Miyaad u isticmaali kartaa qaboojiyaha 'ermine fondant'?
Qaboojintani waa hubaal inay adag tahay in lagu isticmaalo fondant laakiin waxaan door bidaa inaan u isticmaalo sidii buuxin ahaan oo aan u isticmaalo qabow ka adag sidii subagayga fudud ee bannaanka.
Waxaad sidoo kale ku ridi kartaa sifeeyi qabowga si fudud.
Qaboojiyaha 'Ermine' waa mid fudud, kareem leh oo lagu sameeyay bur la kariyey oo ah wakiilka sii kordhaya. Badanaa waxaa lagu magacaabaa baraf barafoobay ama baraf qabow barafoobay. Waqtiga Diyaarinta:10 daqiiqado Waqtiga karinta:30 daqiiqado Wadarta Waqtiga:40 daqiiqado Kalori:107kcal
Waxyaabaha ay ka kooban tahay Ermine Frosting
▢14 oz (397 g) sonkorta granulated
▢3 oz (85 g) bur
▢16 oz (454 g) caano dhan
Tilmaamaha Qaboojinta ee Ermine
Ku shiid burkaaga iyo sonkorta digsi dhexdhexaad ah kuleylka dhexdhexaadka ah. Karso ilaa 2 daqiiqo si aad u dubto burka.
Si tartiib ah ugu dar caanahaaga, xoq si aad isugu darsato oo aad u gaarsiiso kuleylkaaga mid dhexdhexaad ah. Si joogto ah u laaq ilaa isku darku ka adkaado oo u daadiyo sida. Ku dabool duub caag ah oo qabow ha ahaato.
Ku dar subaggaaga baaquli isku-darkaaga istaaga oo ku dheji kor ilaa iftiin iyo qalafsanaan. Si tartiib ah ugu dar isku darka daqiiqda isku dar hal qaado markiiba markii aad karbaashayso. Ku darida tartiib tartiib ah waxay caymisaa subag macaan.
Ku dar faniinkaaga iyo milixda ilaa ay wax waliba kareem yihiin ka dibna waad barafoobi kartaa keegaaga la qaboojiyey.
Ka dib marka barafkaaga 'ermine' uu noqdo mid jilicsan oo cad, waxaad ku karbaashi kartaa 1/4 koob oo budada kookaha ah sifeeya shukulaatada.
Hubso in isku-darka burkaagu uu gebi ahaanba qabow yahay ka hor intaadan qaboojin
Qaboojinta Ermine si fiican uma shaqeyso maalinta xigta. Way fiicantahay inaad si sax ah u isticmaasho ka dib markaad sameyso maadaama ay u egtahay inay 'dejiso' oo aysan ku sii jirin kareem.
Qaboojiyaha 'Ermine' kuma haboona in lagu isticmaalo fondant maxaa yeelay waa mid aad u jilicsan laakiin way ku fiican tahay in loo isticmaalo sidii buuxinta inta u dhexeysa lakabyada
U adeegida:labaoz|Kalori:107kcal(5%)|Kaarboohaydraytyada:9g(3%)|Dufan:7g(kow iyo toban%)|Dufan Dufan:4g(labaatan%)|Kalastarol:labaatanmg(7%)|Sodium:16mg(1%)|Kaliumperyamper:shan iyo tobanmg|Sonkor:8g(9%)|Vitamin A:240IU(5%)|Kaalshiyam:13mg(1%)|Bir:0.1mg(1%)
muxuu dhadhamiyaa buskudka meringue
xagee ka heli karaa ukunta la dubay
bariiska krispie ayaa lagu daaweeyaa karinta qaabaynta doolshaha
sida loo sameeyo casaan jilicsan velvet dhadhan macmal ah
waa maxay cabirka jikada loo isticmaalo
sida loo sameeyo keega strawberry